tuscany Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: tuscany
နေအိမ် > tuscany
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပသို့ဦးသောသူသည်ခရီးသွားများအတွက်တိုက်ကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများလူအစုအဝေး-အခမဲ့အချို့ကိုခံစားနိုငျ, စပိန်ခြေလှမ်းများနှင့် Tivoli ဥယျာဉ်များကဲ့သို့အဓိကဆွဲဆောင်မှုအပါအဝင်. ဖေဖော်ဝါရီလတစ် breather ၏အရာတစ်ခုခုသည်: အဆိုပါအလုပ်များအားလပ်ရက်ရာသီနဲ့နွေဦးအနိုင်အထက်အကြားမွှေးအစက်အပြောက်. အကယ်.…
ဥရောပအနုပညာနှင့်ပြည့်ဝ၏, သမိုင်း, နှင့်ယဉ်ကျေးမှု. အံ့သြစရာမရှိပါကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးနေဝင်ဆည်းဆာမှအိမ်ပြန်ကြောင်းထို့နောက်ရှိပါတယ်. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူ, ရထားစီးနင်းအားလုံးခရီးအကြောင်း, မဟုတ်အမြဲတမ်းလိုရာခရီး. ဒါကြောင့်, sit back and relax and be…